LOBULYARYA (ALISSUM): NOOCYO CAAN AH OO LOOGU TALAGALAY SII KORDHAYA SAWIRRO IYO SHARRAXAAD - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Ubaxa Alissum (Lobularia): noocyada ugu fiican
Lobularia - Warshad gaaban oo leh ubaxyo yar oo caddaan ah, lilac, jaalle, casaan, midabka casaan, waxay ku ururiyeen burush yar. Blooms guga goor dambe iyo blooms inta badan ee dayrta qoto dheer. Fikrado badan: lobularia iyo alissum waa mid iyo geedka isla ama maahan.
Growers growers khibrad wacan warshad sannadkiiba hal sano ah. In botan waxaa loo yaqaan lobularia, kaas oo laga tarjumay Latin ah "pod" (sida loo qoondeeyey qaabka miraha geedka). Xaqiiqdii, labadan magacba waa la xiriira.
Alyssum badanaa waxay leedahay ubaxyo jilicsan iyo jaale ah, lobularia - ubax ah caano, casaan iyo caddaan. Goobta koritaanka - gobollada Mediterranean Shanta nooc ee cirfiidkan, mid kaliya ayaa lagu soo bandhigay dhaqanka - lobularia marin. Warshadda sidoo kale waa warshad malab ah oo soo jiidata shinni ah oo leh malab ah malab iyo dhir udgoon.
"Cabbirro" Transparent Crystals "
Alyssum "Iskalxisyo daahir ah" - warshad ayadoo laga yaabo inay suurtogal tahay in la abuuro labadaba dhirta middoobey oo leh jilicsanaan, iyo midabada ubaxa oo dhan. Aragtidu waxay loola jeedaa sanadlaha, gaarista dhererka 15-25 cm. Ubaxaha qaabka xiddigaha waxaa lagu uruuriyaa inflorescences, waxay leeyihiin midab badan oo casaan iyo lilac.
Waxaa lagu koray si toos ah beerista carrada xilliga gu'ga dambe ama xagaaga hore. Wixii hore ubax laga bilaabo Maarso-Abriil, waxay ku boorinayaan geedo sii kordhaya, kuwaas oo lagu beeray ciidda la daaqay ee meel qorrax leh.
Warshadani waxay u baahan tahay waraabin badan. Sawirada uboosia ubucia waa xaqiijin toos ah in dhirtu u muuqato mid aad u fiican beerashada kooxeed, qurxin beerta dhagaxa ama xuduudda, ku habboon koritaanka ubaxyada.
Ma taqaanaa? Mudo sanado ah, Alissum waxaa ku jira labaatan nooc oo warshadaha ah.
"Koofiyada Easter" - horaan-ubax kala duwan oo hal sano ah ee lobularia. Warshadu waxay leedahay mid ka mid ah wakiilada ugu horreeya ee caleenta caleenta. Muuqaal muuqaal ah oo ka mid ah noocyada waa dherer gaaban, taas oo ay sabab u tahay saameynta roogga oo kale ah. Celceliska dhererka dhirta waa 10-20 cm.
Kala duwanaanta "Koofiyada Easter" waxaa lagu gartaa ubax weyn oo badan. Wakhti dheer waxay haysaa saamaynta quruxda, sidaas darteed waxaa badanaa loo isticmaalaa diyaarinta beeritaanka iyo sariiraha ubaxa. Bannaanka u khibrad leh xusuusnow kala duwanaansho noocyadaas ah, iyada oo aan qarsoodi ahayn ee degaanka iyo awoodda loo leeyahay inay u dulqaado miraha iyo abaarta yar.
Waa muhiim! Kala soocida alumiyum waxaa lagula talinayaa in lagu fuliyo beeritaanka abuurka loogu talagalay geedo. Waqtiga ugu fiican ee tan waa Abriil. Sugitaanka biqilka, qeybtii labaad ee bisha May, waxaad ka dhigi kartaa dego sariirta ubaxa.
Warshad qallalan oo yaryar. Waxay bixisaa dufan hoose, is haysta, duurka udisan oo leh dherer aan ka badneyn 15 cm mid kasta. Sawirka iyo sharaxaadda of this alissum ubax kuu ogolaanaya inaad si loo ogaado sifooyinka ugu weyn ee kala duwan:
hal sano jir;
ubax yar oo guduud ah, ilaa 4 mm dhexroorka;
Bloom ka bilowdaan xagaaga hore ilaa bisha Oktoobar;
sicirka badbaadada wanaagsan.
Qalabka beeridda waa la helaa waxaana lagu beeray ciidda bisha Abriil. Qaadashada habka seedling ayaa lagula talinayaa in ay abaabulaan beerashada bisha Maarso iyo inay ka baxaan May.
Waa muhiim! Waa lagama maarmaan in la ilaaliyo masaafada u dhexeysa dhirta. Si arrintan loo sameeyo, geedo yar yar, oo fogaan 8-10 cm.
Sariiraha ubaxa qoyan, xuduudaha, dhejisyada waxaa lagu qurxin karaa noocyo kaladuwan oo ka mid ah lobularia - "Isku qasbo". Xayawaanka noocyada waa gaaban, gaaraan height of 8-12 cm, waa jaangooyo iyo branching dhexdhexaad ah. Laga soo bilaabo sawirka lobularia ee ubaxa, waxaa cad in kala duwan tani leedahay midab kala duwan.
Cagaar, casaan iyo guduud dhar guduudan ah-asterisks leh dhexroorka 4 mm ayaa lagu ururiyaa rucubyo buraash ah waxayna leeyihiin caraf udgoon oo malab ah. Waxay si buuxda u daboolaan duurka inta lagu jiro ubax, kaas oo soconaya laga bilaabo Juun ilaa Oktoobar. Wixii caleenta noocyo sii kordhaya dalxiiska habka seedling iyo beero toos ah ee ciidda.
Dhexdhexaadin "Dhowr Oriental" oo lagu garto cabbirka yar iyo dhererka ilaa 10 cm. Ubaxyo yaryar ayaa ka samaysan cufan, hindhisyo huuri ah oo dhadhamiya caraf udgoon. Inflorescences fudud oo leh ubaxyo guduudan iyo dhar guduudan ayaa daboolaya duurka inta lagu jiro ubax.
Alissum Blooms laga bilaabo Juun ilaa badhtamaha. Nidaamkan waxaa lagu kordhin karaa adigoo ka jaraya ubaxyo la jarjaray iyo midhaha miraha leh miraha wakhtiga.
Abuuridda miraha la soo saaro Abriil - May, geedo - mar dambe March. Calaamaduhu waxay u muuqdaan laba illaa saddex toddobaad, haddii heerkulka hawada lagu hayo 18 ° C. Kala duwanaanshuhu waa mid hoos u dhacaya dhulka, nalal u baahan, si dhexdhexaad ah qabow u adkaysta. Suurtagal u ah sanduuqyada balbalan ee barkimooyinka iyo sariiraha ubaxa, uma dulqaadanayo qoyaan xad dhaaf ah, laakiin waxay ka baqayaan abaar.
Kala duwanaanta noocaan ah ee "lobularia" -ka cad ayaa sameysa baraf cad-cad oo cufan oo cufan sare leh. Duurka dhirta, oo leh caleemo dhuuban oo cidhiidhi ah, isku dhejin, cufan oo la jeexjeexay, qiyaastii 15 cm dhererka. Ubaxku wuxuu socdaa laga bilaabo guga hore ilaa dayrta. Wixii sii socdo ee geeddi-socodkan waxaa lagu soo rogay in lagaa saaro ubaxyo iyo miraha (haddii aadan u baahnayn abuur).
Dhirta kala duwan ee noocaan ah waxaa lagu gartaa iska caabin qabow, laakiin waxay doorbidaan iftiin, carradu si fiican u da'ay iyo meelo qorrax ah oo beerto. Faafin by abuurka si toos ah abuur ah ciidda ama iyada oo loo marayo geedo.
Waa muhiim! Geedkan sanadlaha ah ayaa si sax ah u sarreeya xilliga dayrta. Alyssum Blooms xagaaga hore, laakiin, ka cabsashada kulaylka iyo abaarta, sida caadiga ah joojiyo in la Bloom ka hor August. By dayrta ee mawjada labaad ee dhirta ubax bilaabmaa oo soconaya ilaa October.
"Boqoradda Dahabka ah"
Alyssum "Golden Golden" - dhirta da'da isku midka ah, gaarista dherer 10-20 cm Qeybaha waxaa lagu gartaa ubax firfircoon laga bilaabo Juun ilaa Oktoobar iyo midabada jaalaha ah ee ubaxa yaryar.
Waxaa loogu talagalay daboolka dhulka waxana uu awoodaa inuu buuxiyo walxo kasta oo leh burooyinkeeda midab leh oo leh malab ah malab. Duufaannada Alissum waa cufan, waxay sameeyaan barkimo, guud ahaanna - rooga ubax, oo lagu duubo ciidda kuleylka xagaaga.
Kala duwan Tani sidoo kale waa abaar u adkaysta iyo dhaxan dhexdhexaad ah u adkaysta. Waxaa la koray inta badan by geedo laga bilaabo dhammaadka February - bilowga March, ilaalinta heerkulka hawada agagaarka 12 ° S. Iyadoo ay soo baxday caleemaha saddexda caleemood ee ugu horreeya, geedo way dhali karaan. Ka dib 6-8 usbuuc ka dib, geedka blooms.
Alyssum waxaa loo isticmaalaa qurxinta meel u dhow derbiyada taageeraya, si loo abuuro xuduudaha cufan iyo beeraha dhagaxyada.
Sida daboolka dhulka, waxaad sidoo kale ku dari kartaa kiniisad yar oo qulqulaya, nemofilu, dichondra, saxifrage, armeria, periwinkle.
Jeelka badda "Rosie O'Day" waxay soo jiidataa inuu bannaanka u khibrad u leeyahay asalka iyo caanaha. Ubaxyada kala duwan ee noocaas ah waa mid caan ah oo leh midab madow-caddaan ah. Tilmaamo dheeraad ah waa:
duurka hooseeya, 10-15 cm ee dhererka;
inflorescences multi-component, kaas oo ka kooban dhowr ubaxyo darsin, leh dhexroor ah 3 mm;
ay duurka weyn ku sameeyaan roogag yar;
Bloom ka bilaw xagaaga hore ilaa Oktoobar.
Kala soocida alumiyu waxay ku dhacdaa sida waafaqsan shuruucda agrotechnology. Seeds for geedo lagu beeray March (by habka aqalka dhirta lagu koriyo), iyo iyaga waxaa lagu beeray dhulka ku dhex bartamaha May. Carrada waxaa loo doortay mid bacrin ah oo aan aad u muuqan. Inta u dhaxaysa geedo fiiro fogaan ah 20 cm.
Ma taqaanaa? Magaca alixu wuxuu ka yimaadaa "alisso" wuxuuna tarjumaa sida xumbada.
"Lilac Queen" - hooyo ka mid ah gobollada Mediterranean, kaas oo siinaya duurka hooseeya, duurka oo aan ka badnayn 15 cm oo heerkul kasta. Warshad sannadle ah oo leh caleemo dabacsan ayaa raalli ka ah ubaxyada ku wareegsan xagaaga dambe xagaaga illaa badhtamaha. Dhaqanka wuxuu siinayaa ubaxyada ugu yar-guduudan-guduudan, leh dhexroor ah 4 mm. Si aad u korto noocyo kala duwan waxaad u baahan tahay:
dooro meel dhalaalaya oo diiran;
abuur dhir ama geedo carrada wanaagsan (suurtagal ah bacrimin);
xajiso masaafada u dhaxeysa caleemaha 10-15 cm.
Dhaqanka Tani waa qaab cajiib ah oo lagu qurxiyo daaqada, buuraha dhagaxyada iyo rabatki loogu talagalay qurxinta balakoonka iyo daaqadaha. Marka lagu daro howlaha heesaha, xayndaabka ubaxa waxay ka dhigaan caraf udgoon oo malab ah.
Kala duwanaanshuhu waa wakiil kale oo ka mid ah qoyska Cabbage iyo warshad caadi ah oo waqti guud ah oo si wanaagsan u kora cimilo diirran. Dhaqanka "Dayrta Dahabka" wuxuu leeyahay ubaxyo yar oo dahab ah oo dahab ah (laga bilaabo iftiin jaale ah ilaa hoy). Dhirta dhirtu waa yar tahay (caleemuhu waxay gaareen 10-15 cm), caleenta - nooc cawl-cawl-cagaaran.
Duufaannada cufan waxay sameeyaan rooga cufan, oo ka samaysan ari udgoon leh warqado malab ah. Beerta lagu beeray (bishii Juun) ama habka rassadnym (laga bilaabo Maarso ilaa Abriil). Alyssum ee kala duwan ee this abuurtaa asal qurux badan ee dhulka ee guriga ama xagaaga, waxay u muuqataa weyn ee beeraha dhagaxa. Lobularia sida hooyo of Mediterranean waa si fiican ugu acclimatised cimilada Yukreeniyaan. Intaa waxaa dheer, bannaanka waxaa la siiyaa tiro badan oo kala duwan oo noocyo kala duwan iyo midabada of this ma aad u baahan tahay in daryeelka ee warshadda. Deriska wanaagsan ee lobularia waa iris aan la jarjarin, tulips iyo ubaxyo xilli dambe oo aan iloobi karin-aan-liiska.